SUUQA SERIE A: Warar goosgoos ah oo ku saabsan suuqa kala iibsiga Talyaaniga – Gool FM
SUUQA SERIE A: Warar goosgoos ah oo ku saabsan suuqa kala iibsiga Talyaaniga
Raage June 8, 2016
(Roma) 08 Juunyo 2016 – Kaddib wakiilkiisa, waxaa haatan warka rumeeyay xitaa madaxwaynaha Empoli, Fabrizio Corsi, oo sheegay in Mario Rui uu u wareegi doono AS Roma: “Wada xaajoodyadu meel wanaagsan ayay marayaan, wuxuuna daafucu ku tegi doonaa amaah ay khasab tahay in la iibsado”. ayuu yiri.
Mario Rui, 25 jir, una dhashay Portugal, ayaa xagaagii 2013 kusoo biiray kooxda Empoli.
Radja Nainggolan ayaa isna ka hadlay wararka sheegaya inuu u socdo Ingiriiska iyo kooxda Chelsea: “Weligeey baan dhihi jirey way adkaan doontaa inaan Talyaaniga ka tago kaddib 12 sano. Haddii aan tegayo iyo haddii kale waannu arki doonnaa, mase ogi.” ayuu yiri laacibkan reer Belgium oo qiray inay wada hadleen Antonio Conte.
Fabrizio Corsi, oo ah madaxwaynaha Empoli, oo u warramayey Tuttomercatoweb.com ayaa yiri: “Waxaa jira 4-5 naadi oo xiisaynayna Riccardo Saponara, waloow aysan jirin wada xaajoodyo rasmi ah oo furmay, balse wuxuu ku tegi karaa 25 milyan sida Vazquez “.
Laacibkan ayaa lala xiriirinayaa kooxo ay ka mid yihiin Juve, Napoli, Viola iyo xitaa naadigii uu kusoo faloobay ee AC Milan.
Claudio Lotito oo ah badrooniga SS Lazio ayaa hadal kooban siiyey Tuttonapoli.net oo wax ka waydiiyey inuu garabka Talyaaniga ee Antonio Candreva u wareehayo kooxda SSC Napoli: “Run maaha, run maaha” ayuuna ku koobay warkiisa.
Marcelo Brozović ayaa ka hadlay mustaqbalkiisa isagoo ku sugan xerada tababarka Croatia: “Ma Inter baan ka tegayaa?” Waxba ka oran maayo arrintaasi mana jiro cadaadis aan uga warramo suuqa kala iibsiga. Haatan waxaan kaliya ku dadaalayaa koobka Euro. ”
Cristian Zapata ayaa marka uu kasoo laabto Copa America waxaa lagu wadaa inuu AC Milan la galo wada xaajoodyo ku saabsan in qandaraaska loo kordhiyo sida uu qabo Gianlucadimarzio.com, Watford ayaa iyaduna isha ku haysa laacibkan Colombian-ka ah oo uu aad ula dhacsan yahay Walter Mazzarri.
Boateng oo xaaskiisa iyo caruurtiisa ku amray inay guriga joogaan intuu socdo Euro 2016!!
Real Madrid & Barcelona oo ku dagaallamaya Keita Balde Diao